Huawei MateBook D ohuru ohuru na ekwe ekwe ekwe FreeBuds 3 ohuru na uhie | Akụkọ akụrụngwa
Anyị nọ na ‘roundup’ nke ozi ọma nke ụlọ ọrụ Asia kwadebere maka anyị n’afọ a 2020 na enweghị ole na ole. Anyị na-ebido afọ ahụ Huawei na-emezigharị pọtụfoliyo laptọọpụ ya na MateBook D14 na MateBook D15, yana mbipụta “ụbọchị Valentine” pụrụ iche nke FreeBuds 3 ya. Tụkwasị na nke a, Huawei hapụrụ anyị bọmbụ, ọ bụkwa na n'oge Mobile World Congress nke a ga-eme na February na Barcelona, ​​ha ga-amalite smartphone ọhụrụ nke ga-eme ka anyị niile ghara ikwu okwu, gịnị ka ha ga-akwadebe? Ka anyị leba anya na ngwaahịa ọhụrụ ndị a.
1 Nwunye ohuru di D14 na D15
2 New Huawei FreeBuds 3
3 Pablo Wang doro anya: anyị ga-aga n'ihu ee ma ọ bụ ee
Nwunye ohuru di D14 na D15
Ngwaọrụ abụọ a nwere ihuenyo HD zuru ezu (1920 x 1080px) na akụkụ 178º na-elele ekele ya IPS panel. Anyị enweela ike inyocha ndụ na ha na-agagharị nke ọma, n'eziokwu, otu enyochachara na ihe omume Huawei na otu nwere ngalaba aka na-enye anyị ohere ịmekọrịta jiri ngwaọrụ mkpanaka nke Huawei na oru ma ọ bụrụhaala na EMUI 10 arụnyere dị ka ngwa ngwa. Ọ na-eju anyị anya nke ukwuu na laptọọpụ Huawei ọhụrụ a na-enweghị atụ nke na-adị ka ọ nweghị ọkwa ọ bụla n'ihe gbasara ọnụahịa enyere njirimara ha.
A na-etinye ha na chassis nke aluminom niile (nke dị ọnụ ala karịa), ma na-atụkarị aka na ngosi ngosi ọhụụ ọhụụ, naanị 4,8mm gbara ọkpụrụkpụ na MateBook D14 na 5,3mm oke. Na ụdị nke MateBook D15. Agbanyeghị, ihe kachasị dị egwu na ihe ọtụtụ na-abanye n'anya bụ bọmbụ ọhụrụ ya nke bi na ya 87% nke n'ihu n'ihe banyere ụdị 15-inch na 84% na ụdị 14-anụ ọhịa. Rịba ama na ụdị nke 15 dị n'ezie nwere 15,6, ya mere ọ dị nso na 16 sentimita asatọ nke ụdị ndị ọzọ arịgoro.
Newdị ọhụrụ ndị a nwere nhazi AMD Ryzen 5 3500U, nke na-abụghị karịsịa akwụkwọ akụkọ ma zuru ezu ịrụ na ike na-emekarị chọrọ na-enweghị ịba ụba oriri batrị. Ha abụọ ga-esonyere ya 8GB RAM gbasaa na 16GB na nhọrọ onye na-eri ya, ebe MateBook D14 ga-enwe 512GB SSD site na mbido, MateBook D15 ga-enwe 256GB nchekwa na ụdị ọkọlọtọ ya. Ma, ọ bụghị naanị ha bụ ihe ọhụrụ, anyị na-ahụ na ha mgbanye sistemụ mkpisiaka que ga-ekwe ka anyị nọrọ na tebụl na naanị 9 sekọndEbe ọ bụ na anyị pịa ya (ịnwepụ ya) na enweghị mkpa ịbanye karịa data.
Nke ahụ bụ, ọ na-echekwa mkpịsị aka anyị n'oge sekọnd ndị ahụ ka ị kpọghee ma banye na ọbụna site na anya, ihe ijuanya. Okwesiri ikwuputa na agbanyeghi "veto" nke Donald Trump nyere iwu, laptọọpụ ndị a nwere Windows 10 dị ka ọkọlọtọ, nakwa ike njikọta Huawei OneHop ị ga-atụ anya site na a ika ngwaọrụ. Naanị site na ịme ka njedebe anyị kwekọrọ na teknụzụ a (ọkachasị EMUI 10) anyị ga-enwe ike ịhụ ihuenyo mkpanaka na laptọọpụ ozugbo ma ọbụnakwa soro ya rụọ ọrụ ngwa ngwa. Ọ dị mkpa ịkọ ụgwọ ya site na USB-C site na nkwụnye nkwụnye 65W zuru oke (ọkara elekere maka ụbọchị eji ya).
Enyerela FreeBuds 3 carmine uhie uhie iji nabata ụbọchị Valentine (February 14 na-esote). FreeBuds 3 ndị a na-acha uhie uhie dị ugbu a na Amazon site na 179 XNUMX na ụbọchị ole na ole sochirinụ ha ga-apụtakwa na ụlọ ahịa ndị ọzọ dịka Worten, MediaMarkt na El Corte Inglés. Ọ bụ ezigbo onyinye na ọ dịkwa ntakịrị site na ịga n'ihu nke ụfọdụ ụlọ ọrụ na-enye banyere ụdị ngwaahịa a, agba ọcha na agba ojii. Uhie a na-atọ ụtọ nke ukwuu ma na-enwupụta na ìhè nke aka ya, yabụ anyị ga-enwe ike ịiche onwe anyị na ndị ọzọ.
A na-eji ekweisi eme ihe site na inwe njedebe dị ala karịa 190ms ekele ya Kirin A1 processor nke ejirila ihe atụ na Huawei Watch GT2 kachasị mma. Banyere obodo kwụụrụ onwe ha, ha na-enye 4 awa nke playback na otu ụgwọ, ngwa ngwa odori nke 70% na dị nnọọ 30 nkeji na 20 awa nke playback ewere n'ime akaụntụ ikpe. Ihe ndị a bụ ụfọdụ ekweisi ekweisi TWS kachasị mma anyị hụrụ n’ahịa ma ha gụnyere mkpọtụ mkpọtụ na-arụ ọrụ. Nọrọ na-ege ntị na ọwa anyị YouTube na ngalaba anyi nke reviews n'ihi na ebe ahụ ị nwere ike ịhụ nyocha na omimi.
Pablo Wang doro anya: anyị ga-aga n'ihu ee ma ọ bụ ee
Anyị nwere ụlọ ọrụ nke Pablo Wang, Director nke Huawei Consumer Spain onye mere ka o doo anya na ụlọ ọrụ ya ga-anọ n'ahịa a ee ma ọ bụ ee, na-ezo aka na Donald Trump nwere mmasị na itinye ihe mgbochi n'ụzọ Huawei, ụlọ ọrụ siri ike nke dị ka otu n'ime ahịa kachasị ike na China. Ọ hapụkwara anyị ntakịrị ihe omimi, na-echetara anyị na Huawei ga-eweta ngwaọrụ ọhụrụ na MWC.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Ihe ohuru ohuru nke Huawei MateBook D na ekweisi ọhụrụ FreeBuds 3 na uhie
Ihe ngosi March: iPhone 9, iPad Pro, MacBook na ọtụtụ ndị ọzọ ...